Nidaamka Dowladnimada Soomaaliya oo hoos u sii socda – Somali Top News
March 23, 2019 March 23, 2019 Somali Top News	0 Comments
Waxaa muuqanaya arimo aan idhaha laga qabsan karin oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada Soomaaliya sida:-
-Waxaa si aan aheyn wadadii saxda aheyd ku socda dhamaan shaqooyinkii Wasaaradaha dalku qaban jireen ama ay aheyd iney qabtaan.
-Inta badan Wasaaradaha dalku malaha Agaasimayaal Guud oo rasmiya waxaa mudo sanad iyo bar ah Xaafiisyada jooga dhalinyaro si KMG ah shaqada loogu dhiibay oo aan aqoon iyo karti ay qorshayaal horumarineed ugu jeexaan Wasaaradaha laheyn.
-Wasiirada dalkeenu uma madax banaana shaqooyin kooda lamana imaan karaan hal abuurnimo iyo horumar u gaar ah ee waxaa wax looga yeeriyaa Xaafiiska PM waxaana lagu wareeriyay wax layiraahdo Tubaha Qaranka oo aan dalkaan dani ugu jirin. Marka aad u dhabo gasho howlaha wasaaradahana waxaad isleedahay waa Nootaayooyin soo saara qoraalo oo kaliya.
-Waaxaa sidaas oo kale howlgab laga dhigay Hey’addii sharci dejinta oo gebi ahaanba aan la aqoon meel lagu sheego iyo cid ay la xisaabtamaan waxeyna noqdeen iminka dhamaantood qurba joog ka dib markii kuwii dal joogta ahaa iyagana lagu abaal mariyay VISA-yaal si looga mashquuliyo shaqooyin Kooda.
-Waxaa kala taagan labadii aqal ee Baarlamaanka taas oo sababtay in la furi waayo Kalfadhigii Baarlamaanka oo waqtigii uu firmi lahaa la soo dhaafay khilaafkaas xalintiisuna ma muuqato
-Waxa aan meel lagu sheegin xiriirkii Maamul Goboleedyada iyo dowlada dhexe mana muuqato hadda cid arimahaas u soojeeda iney ka xaal mastuureyso.
-Waxaa sidoo kale maalmahaan qeyla dhaani ka taagan tahay dhankii Ciidamada oo ahaa weligood kuwa aan xiisadaha Siyaasadeed ee dalka jira ku dhex milmin balse aad moodo iminka fursad laga helay Madaxda dowladan awgeed ey sababtay in ciidamadii loo dabamaro oo xaalkooda la siyaasadeeyo
-Amnigii ayaa isaguna noqday mid xataa wax ka sheegistiisii gabay kadib markii uu noqday faraha laga qaad oo waxkale iska daaye la awoodi waayay qasaaraha ka dhasha kaliya In laga hadlo marka uu dhib dhaco.
-Arimaha Siyaasadda dibada,Dhaqaalaha dalka , xiriirka Amisom iyo deeq bixiyaasha ayaa iyagana madmadow badani ku jiraa.
-Arimaha Qabaailka ayaa iyaguna soo xoogeysanaya oo la doonayay iney waqtigaan noqdaan kuwa la sii naxuusiyo,taana waxaa daliil u ah dagaal qabiileedka deegaano dhowr ah ka soo cusboonaaday madaxda DFS-yana aysan weli ka hadlin ama gacan ka geysan joojintooda.
Halkaas markay taagan tahay ma aha wax laga aamusi karo danta guud ee Qaranka waayoo waa wax naga wada dhexeeya,sidaas daraadeed waa iney inta goori goor tahay Madaxda sarsare ee Dowladdeenu hurdada ka kacaan oo u istaagan badbaadada iyo jiritaanka dowladda oo ah howl nidaam dib u soo dhisoddiisu ay ku baxday Naf,Waqti iyo maal badani sidii Soomaaliya dowlad nimadeeda loo soo celin lahaa.
W/Q: Tafatiraha Somalitopnews.com
← Al shabaab kills five, including deputy minister in Mogadishu
Kulan Deg Deg ah oo laga yeeshay amniga guud ee dalka iyo dagaalka Al shabaab →
February 10, 2019 February 10, 2019 Somali Top News 0